चर्चित वली राज ! « Postpati – News For All
चर्चित वली राज !
रमाकान्त बास्तोला 'रमेश'
नेपाल र नेपाली, अनि राष्ट्र र राष्ट्रियतासंग सत्ता क्रियाकलापको मुख्य भूमिका जहिले अगाडी आउने गर्दछ । देशलाई कता लैजाने ? जनतालाई कस्तो ब्यवहार गर्ने ? देशको मुद्दा के के हुन् । जनअपेक्षा के हो ? या कानुनी मान्यता र प्राबधानका बिषयहरु के हुन ? सत्ता र राजनितीमा यसको चर्को बहस पनि हुने गरेका छन् ।
देशको लागि बनाइएका पटक पटकको संविधान र त्यसले प्रत्याभूत गरेका न्यायका कार्यहरु अर्थात उचित कार्यन्वयन आशन्काका बिन्दुहरु अघि आउछन् । राजनीतिक एजेण्डा दलिय एजेण्डा भएका छन् । सत्ता हत्याउने एजेण्डा मात्र बनेका छन् । अनेक तरहले सत्ता हत्याउने र राज गर्ने खेलक संघारमा छ यसले राजनितिक दल मात्र होइन देश, जनता र राष्ट्रियता नै धरापमा पर्ने खाडल बनिरहेको छ । देशको आन्तरिक तथा बाह्य कुटनैतिक रणनीति फेल हुन पुगेको छ जसकारण बैदेशिक हस्तक्षेपले देश आक्रान्त पार्दै थप समस्याहरु थपिदै गएको छ ।
जब देशमा ठुला ठुला संघर्षहरु भए तब नयाँ आयाम र नयाँ अनुभुतीपुर्ण राज्यको परिकल्पनामा आशातित जनताहरुले ठूलो बलिदानी राष्ट्रका लागि गर्दै आए । तर आशै आसामा असन्तुष्ट, आक्रोश र बिद्रोहको घैला भरिदै गयो । परिवर्तनकै दाउमा अनेकौ घटनाहरु घटे । मुल्यांकन भयो तर निचोड निराशा र अकर्मण्यता संगै त्यसको प्रत्याभूत हुनै पाएनन् । देशका हजारौं गाथाहरुको भत्तीभाव गाईयो तर चाहना पूरा भएन या भनौ जनअपेक्षा र जन मुद्दाहरू पूरा भएनन् । बर्गिय आन्दोलन देशमा भयो तर बर्ग उथ्थान भएन । धर्म निरपेक्ष , समाबेशिताका कुरा उठान भए तर तर नयाँपन भेटिएन आम्शिक परिवर्तन भएपनि समस्या पुरानै रह्यो । नामका र बेकामी संघर्षहरुमा परिणत बनाउन सत्ता सञ्चालक र प्रतिगामी तत्वहरुको षड्यन्त्रमुलक गुरु योजना पास भयो । जनताको मुद्दा फेल खाईरह्यो ।
देश भित्र रहेका उधोग कलकारखाना निजि क्षेत्रलाई दिने बिषयमा सुम्पने विवादास्पद र अपारदर्शी कार्य पुन : सुरु हुँदा यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै तरंग आउने निश्चित देखियो र भयो पनि । बिगतको सरकारले देश भित्ररहेका कुल ६९ वटा सार्वजनिक कलकारखाना मध्ये ३० वटा निजीकृत गर्दा उद्योग माफियाहरुले देस भित्र रहेका उधोगहरु ट्रलि बस, बाँसबारी छालजुत्ता कारखाना, साझा बस, नेपाल एयरलाइन्स,भक्तपुरको चाइनिज इँटा कारखाना भृकुटी कागज कारखाना, सिमेन्ट कारखाना,चिनी कारखाना जस्ता ठुला ठुला उद्योगहरुबाट फाइदा लुटेर अहिले टाट पल्टिए पूर्ण रूपमा बन्द छन। अस्तब्यस्थ परिस्थिती सृजना भयो । मौलिक हकको प्रत्याभूत सम्म जनताले गर्न सकेनन् । अधिनायकवादि, फासिवाद हावी हुन पुग्यो । जुन मुद्दा जनयुद्दले बोकेको थियो र अनबरत संघर्षमा हजारौं सहिद, ब्यपत्ता, घाइते भएका थिए जसले बलिदानी पुर्याएका थिए र जुन कारण जनता युद्दमा होमिएका थिए त्यो पूरा हुनै सकेन । जनयुद्दका नाइकेहरु काल कोठिमा कथित समृद्दीका नारा घन्काउदै बस्न थाले ।
जब देशमा केपि वलि नेतृत्वको शत्तीशाली राज्य संचालित भयो तब क्रमिक देशमा ईतिहासका भन्दा ठुलो धोका खाएको अनुभुत जनताले गर्न थालेका छन् । सत्ता र पद लत्याउने होड र मुर्ख्याइँ अभिब्यत्ती र कृयाकलापले देशको अवस्था नै ध्वस्त बनाउन सक्ने बाटो बनिसकेको छ । दिर्घकालिन परिणाममा शुन्यता बोकेको सरकारको सत्तामा लाचार छाँया देखिन थालिसकेको छ । देश कसले संचालिन गरेको छ भन्ने प्रश्न नै मुख्य प्रश्न बनेर आज खडा भएको छ । ब्युरोक्रेशी र निजि क्षत्रको अवस्था डामाडोल हुँदै आएको छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठोलो ह्रास ल्याएको छ । सत्ताशिन ब्यत्तिहरु नै देशलाई होलि वाइनमा चोबेर खाने दाउपेच गर्न तल्लिन बनेका छन् ।
लेखक: जनपत्रकार संगठनका केन्द्रिय सदस्य तथा कास्की जिल्ला अध्यक्ष हुन्